Ku dhawaaqista Magacyada Golaha Wasiirada Soomaaliya oo dib u dhacday iyo sababta | Kobciye24.com
Golaha Wasiirada cusub oo tiradooda lagu sheegay (30 Wasiiro , 30 Wasiir kuxigeenno iyo 10 Wasiiru dowlayaal), taasi oo ka dhigan in liiska lagu arki doono Wasaarado cusub sida Dalxiiska, Deegaanka, Dib u heshiisiinta iyo kuwa kale ayaa sababi karta in loo waayo Wasaaradahaasi xarumo ay ku shaqeeyaan waa haddii aanay Xukuumaddu u howlgelin dib u dhiska iyo faarujinta xarumihii hore ee dowladda oo dad ay deegaansadeen.
Dib u dhaca shaacinta Golaha Wasiirada ayaa loo cuskinayaa culeysyo ka jira xulidda shakhsiyaadka Wasiirro ka kala noqon lahaa Wasaaradaha Arrimaha Dibadda, Maaliyadda iyo Gaashaandhigga oo ah seddexda Wasaaradood ee ugu saameynta badan dowladda marka la eego Wasaaradaha loogu yeero Darajo “A”.
Warar soo baxay ayaa sheegaya in Xilka Wasiirka Arrimaha Dibadda ay ku loolamayaan Wasiirkii Maaliyadda ee Xukuumadda sharciyaddeedu ay idlaatay Maxamed Aadan Ibraahim “Fargeeti”, Wasiirkii Caafimaadka ee Xukuumadda sharciyaddeedu ay dhammaatay Maxamed Xaaji Cabdinuur “Madeer”, Safiir kuxigeenkii hore ee Soomaaliya ee dalka Algeria Dr. Xasan Maxamuud Cali iyo shakhsiyaad kale.
Si la mid ah Wasaaradaha Maaliyadda iyo Gaashaandhigga ayaa la filayaa in loo magacaabo Wasiirro cusub oo dib u xoojiya hannaanka dib u qaabeynta Maaliyadda, la dagaalanka musuq maasuqa iyo dib u dhiska Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya.
Dad ku dhow Madaxtooyada ayaa sheegaya in Golaha Wasiirada la shaacin doono ka hor inta aanu Madaxweynaha u ambabixin dalka Kenya.
Madaxweyne Farmaajo ayaana March 21 u ambabixi doona Magaalada Nairobi, halkaasi oo la filayo in si heer qaran ah loogu soo dhoweeyo kadib casuumaad rasmi ah oo Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu u fidiyay, waxa ayna labada Madaxweyne yeelan doonaan kulan heer sarreeya oo looga hadli doona danaha labada dal.
Sidoo kale Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa March 25 uga qeybgali doona Kenya Shir madaxeed gaar ah oo Madaxda dalalka ku jira urur goboleedka IGAD ay kaga hadli doonaan qaxootiga Soomaaliyeed ee ku kala firirsan Kenya (324,000) , Ethiopia (241, 000) , Yemen ( 255,000), Uganda (39,500) iyo Djibouti ( 13, 000) .